Python3 Lesson5- Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python3 Lesson 5
Python3 Lesson 5
by KhitMinnyo on January 12, 2018 in Python-for-Hackers
Lesson4မကြည့်ရသေးသူမှာ ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပါ
Studying the small Programs
Python မှာ none ဆိုတာဟာ special constant ဖြစ်ပါတယ်။ none သည် null value ဖြစ်ပါတယ်။ False နဲ့ မတူသလို သုည (0) နဲ့လည်း လုံးဝ မတူပါဘူး။
none ဆိုတာဟာ empty string (တစ်နည်းအားဖြင့် ဗလာ ကွင်း) ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက none ကို အခြားတန်ဖိုးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တိုင်း False ဆိုတဲ့ အဖြေပဲရပါမယ်။ သူ့မှာ ဘာမှမရှိ။ သုညတောင် မရှိတာပါပဲ။
ပိုပြီးနားလည်သွားအောင် အောက်ပါအတိုင်း IDLE3မှာ ရိုက်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ New File ခေါ်စရာမလိုဘူးနော်။ IDLE3 ဖွင့်ပြီး တိုက်ရိုက် ရိုက်ရုံပဲ။
>>> None == ''
အထက်ပါ ဥပမာတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် none သည် အခြား ဘာနဲ့မှ မတူဘဲ None အချင်းချင်းသာ တူကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။
None IN A BOOLEAN CONTEXT
Inaboolean context, None is false and not None is true. ပါ
သဘောပေါက်ဖို့အတွက်တော့ အောက်ပါတိုင်း ဆက်ရိုက်ကြည့်ပါ။
>>> def is_it_true(anything):
print("yes, it's true")
print("no, it's false")
>>> is_it_true(not None)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Program လက်ရှိ RUN နေတဲ့ Directory ကို python မှာ ရေးနေရင်း ခေါ်ကြည့်နိုင် ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအတိုင်း စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ IDLE 3
/root ဒီအပိုဒ်ကလေးက ဘာကို ဆိုလိုလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ location မှာ default ရှိနေတဲ့ location ဖြစ်ပါတယ်။
Kali မှာမို့ သည်လို ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီး Windows မှာဆိုရင်တော့ C:\_program\_python31 ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (Install လုပ်စဉ်က location နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်)
>>> os.chdir('/root/Desktop/example') ဒါကတော့ RUN နေတဲ့ နေရာကနေ DIR ပြောင်းလိုက်တာပါ။ chdir = change directory လို့ မှတ်ထားရပါမယ်။ သြော် ပြောဖို့ မေ့နေတာ os = Operation System နော်။ သိပြီးသားမို့ မရှင်းပြခဲ့တာပါ။
>>> နောက်တစ်ကြိမ် direction ပြန်ဖော်ကြည့်ချိန်မှာတော့ အလယ်ကြောင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းခဲ့တဲ့ Direction အတိုင်း ပြောင်းသွားတာ တွေ့ရမှာပါ။။
ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ get ဆိုတာ ရယူတာ။ cwd ကတော့ Current Working Directory ပါ။ ခေါင်းစဉ်မှာပေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာ။
ဒါကြောင့် Python က High Level Language လို့ ပြောခြင်းပါ။ လူလည်းနားလည် စက်လည်းနားလည်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ အများကြီး ပါဝင်လို့ပါပဲ။
WORKING WITH FILENAMES AND DIRECTORY NAMES
Working With FileNames and Directory Names ဆိုကတည်းက ခု ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းလေးကို သိရှိလောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်။
IDLE3မှာ ခုန ရိုက်ခဲ့တဲ့ အောက်မှာပဲ ဆက်ရိုက်ကြည့်ရအောင်နော်။ ပိတ်မိသွားရင် အသစ်ပြန်ဖွင့် အပေါ်ကဟာလေးတွေ ပြန်ရိုက်ကြည့်။ ကဲ စပြီ။
>>> print(os.path.join('/root/Desktop/example/', 'testing.py')) join ဆိုကတည်းက ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်နော်
>>> print(os.path.join('/root/Desktop/example', 'testing.py')) / ပါတာနဲ့ မပါတာ ကွာခြားမှု မရှိဘူးနော်။
#This is our first Dictionary in Python
spanish = dic ()
spanish ['hello'] = 'hola'
spanish ['yes'] = 'si'
spanish ['one'] = 'uno'
spanish ['two'] = 'dos'
spanish ['three'] = 'tres'
spanish ['red'] = 'rojo'
IDLE3 မှာ File New ခေါ်ပြီး ရေးကြည့်ပါ။ ပြီးရင် RUN ကြည့်ပါ။ print လိုသော meaning ထွက်လာပါမယ်။ ဒီနေရာကိုတော့ ထပ်ရှင်းပြစရာ မလိုတော့ဘူးထင်လို့ အကျယ်မပြောတော့ပါဘူး။
ကဲ သင်ပြီး သမျှလေးတွေကို ပြန်နွှေးတဲ့အနေနဲ့ ပရိုဂရမ်လေးတွေ စုရအောင်ပါ။
တစ်ခုစီကို idle3 မှာ file new ခေါ်ရေးပြီး folder တစ်ခုမှာ စုသိမ်းထားရအောင်။
ပရိုဂရမ် တစ်ပိုင်းစီကို # နဲ့ ပြထားတယ်
#avarage program 2
input ("Press Enter to exit.")
#average program 3
number=float(input("Enteranumber: "))
အထက်ပါ 3မျိုးကတော့ average (ပျမ်းမျှ) ရှာတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးတွေပါ။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရေးရေး သင်္ချာ formula ကတော့
ပျမ်းမျှခြင်း = စုစုပေါင်းကိုတည် / အရေအတွက်နဲ့ စား
ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား သင်္ချာ ဖော်မြူလာတွေကိုလည်း အခြေခံပြီး ရေးလို့ ရပါတယ်။ ပြောဖို့ လိုတာလေး ရှိနေသေးလို့ ဆက်ပြောပြပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ သင်တန်း အစမှာတုန်းက python2ကိုပဲ အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး input, raw_input,float တို့အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တာ မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ မမှတ်မိရင် ထပ်မပြောပါ။ Second Scheme မှာ ပြန်ကြည့်ပါ။ Python3 မှာတော့ raw_input နဲ့ input ၂မျိုးလုံးအတွက် input function တစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုပါတယ်။ input လုပ်လိုက်တဲ့အရာက ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ရမယ် ဒသမလည်း တွဲပါချင်တယ်ဆိုရင်တော့ float သုံးနိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါ ဥပမာ3ပုဒ်မှာ နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒသမ ကိန်းတွေကို ပြောင်းရွှေ့ ကစားနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါ ဥပမာကို လေ့လာပါ။ idle3 မှာ >>> new မဖွင့်ဘဲ တစ်ကြောင်းစီ ရိုက်ကြည့်ပါ။ ပြောင်းလဲမှုကို သတိထားပါ။ တစ်ကြောင်းစီအတွက် ရှင်းပြချက်ကို နံဘေးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
number = 1234.5678 ဒသမကိန်းတွေနဲ့ variable သတ်မှတ်လိုက်တာပါ
print (number) ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင် 1234.5678 လို့ တွေ့ရပါမယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ
number = round(number,2) ဒီနေရာမှာ round နဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ
print (number) ၁၂၃၄.၅၇ ပဲ ထွက်လာပါတော့မယ်။ ကျောင်းမှာလည်း သင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒသမ နောက်မှာ ပွိုင့် ၅၀ ကျော်ရင် ရှေ့တစ်ခု တိုးရတာ။
thousands = number / 1000 ဒီနေရာကမှာတော့ ခုန ၁၂၃၄.၅၆၇၈ ကို ၁ထောင်နဲ့ စားလိုက်ပါတယ်။
print (thousands) ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ ၁.၂၃၄၅၇ ပဲ ကျန်ပါတယ်။
ဒသမနောက်ကို ကိန်းတစ်လုံး ရွှေ့ချင်ရင် ၁၀၊ ၂လုံးရွှေ့ချင်ရင် ၁၀၀နဲ့ စားရတာ သိပြီးသားပါနော်။
thousands = int(thousands) int ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ဒီနေရာမှာ ဒသမ ကိန်းကို ကိန်းပြည့်အဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာပါ။
print (thousands) ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင် ကိန်းပြည့်ပဲချန်တော့ ၁ ပဲ ကျန်တာကို တွေ့ရပါမယ်။
remainder = number % 1000 တစ်ထောင်နဲ့ စားလို့ ရတဲ့ အကြွင်းကို လိုချင်တဲ့အတွက် % ဒီသင်္ကေတလေးကိုပဲ သုံးသွားတာ သတိပြုပါ
print (remainder) ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဒီလို ရလာပါပြီ။ 234.56999999999994
pretty_output = "$" + str(thousands) + "," + str(remainder) ကိန်းစဉ် ရှေ့မှာ ဒေါ်လာ တပ်ပေးခြင်းပါ။ ဘာတွေကို ပေါင်းစပ်ထားလဲဆိုတာ သတိပြု ကြည့်ပါ
print (pretty_output) $1,234.56999999999994 ထွက်လာတာ တွေ့ရပါမယ်။
input ("Press Enter to Exit.") ဒါကတော့ ပရိုဂရမ် ချက်ချင်းပိတ်မသွားစေဘဲ ရပ်တန့်ဖို့ ထည့်ခဲ့တာပါ။ သိပြီးသားပါနော်
if, else, elif တို့ လေ့လာတုန်းက အခြေအနေလေးတွေလည်း မှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ မေ့သွားမှာစိုးလို့ အတိုတစ်ပုဒ် ပြန်လုပ်ကြည့်ရအောင်။
if x == 'spammy':
print ('Hi spam\_n')
print ("Nice weather we're having")
print ('Haveanice day!')
print ('Not havingagood day?')
ဒီခါတော့ စာမေးပွဲမှာ အဆင့်သတ်မှတ်တဲ့ ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုကို ရေးဆွဲပြပါမယ်။ ရှင်းပြချက်ကိုတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပဲ ရေးတော့မယ်နော်။
if score >= 80: ၈၀ နဲ့ သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ ၈၀ ကနေ အထက်ကို Grade A လို့ သတ်မှတ်မယ်ပေါ့။
else: ၈၀ မကျော်ရင်ရော။ ဒီအခြေအနေမှာကျ စဉ်းစားစရာတွေ ပိုများသွားပါပြီ။
if score >= 70: ၇၀ နဲ့ သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ ၇၀ ကနေ အထက်ကို Grade B
else: 70 မရရင်ရော။ သူ့ထဲမှာ အပိုင်း ထပ်ကွဲပြန်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူ့အတွင်းမှာ ထပ်ဝင်ရေးရပါလိမ့်မယ်။
grade = 'C' 55 နဲ့ သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ 55 ကနေ အထက်ကို Grade C
else: ကောင်းပြီ။ ၅၅ မရရင်ရော။ ၄၀ ကနေ အထက်ကျ အောင်ရုံပေါ့။ ၄၀ အောက် ရောက်ရင် ကျပြီပေါ့။ အခြေအနေ ၂ရပ် ထပ်ကွဲတယ်။ သူ့အောက်မှာ အခြေအနေထပ်ကွဲတာမို့
if score >= 40: if else တွေကို သူ့ အတွင်း ပြန်ဝင်ရေးရပြန်ပါတယ်။
print ("\_n\_nGrade is: " + grade)
အဆင့် ခွဲခြားပေးနိုင်မယ့် နောက်ထပ် ပရိုဂရမ် တစ်မျိုးပါ။ ရေးပုံကွဲပြီး ရေးနိုင်တာတွေကို သတိထားပါ။ ခုရေးမယ့်ပုံစံက အတွင်းအပြင်ဆိုတာတွေ မရှိတော့ ပိုပြီး လွယ်တယ် ထင်ရနိုင်ပါတယ်။
elif score > 40 or score == 40:
အရမ်း များပြီး ရှုပ်ကုန်ပြီလား။ ပုံစံတစ်ခုချင်းစီရဲ့ သဘောသဘာဝလေးကို သဘောပေါက်ပြီဆိုရင် ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ပါပြီ။
By KhitMinnyo on January 12, 2018